Akuko - Northvolt, ụlọ ọrụ batrị lithium obodo Europe nke mbụ, na-enweta nkwado ego nke ụlọ akụ nke US $ 350 nde
Northvolt, ụlọ ọrụ batrị lithium obodo Europe nke mbụ, na-enweta nkwado ego nke ụlọ akụ $ US nde $ 350
Dị ka akụkọ mgbasa ozi si mba ọzọ, European Investment Bank na onye na-emepụta batrị Sweden bụ Northvolt bịanyere aka na nkwekọrịta $ US $ 350 iji nye nkwado maka ụlọ ọrụ batrị lithium-ion nke mbụ na Europe.
Foto sitere na Northvolt
Na July 30, oge Beijing, dịka akụkọ mgbasa ozi si mba ofesi si kwuo, Bank Investment Europe na onye na-emepụta batrị Sweden bụ Northvolt bịanyere aka na nkwekọrịta $ 350 nde iji nye nkwado maka batrị lithium-ion nke mbụ na Europe.
A ga-enye ego site na European Strategic Investment Fund, nke bụ ogidi isi nke atụmatụ itinye ego na Europe. N'afọ 2018, European Investment Bank kwadokwara ihiwe usoro iziputa ihe ngosi nka Northvolt Labs, nke etinyere na nrụpụta na njedebe nke 2019, ma mechie ụzọ maka ụlọ ọrụ mpaghara kacha ọhụrụ na Europe.
A na-ewu ụlọ gigabit ọhụrụ North northt ugbu a na Skellefteé nke dị na ugwu Sweden, ebe dị mkpa maka ebe a na-egwupụta akụ na ebe a na-egwupụta akụ, nke nwere akụkọ ntolite ogologo oge na imepụta ihe. Na mgbakwunye, mpaghara ahụ nwekwara ebe nchekwa siri ike. Arụ osisi na ebe ugwu Sweden ga - enyere Northvolt aka iji ike emeghari 100% na usoro mmepụta ya.
Andrew McDowell, onye osote onye isi oche nke European Investment Bank, rụtụrụ aka na kemgbe e guzobere European Batrị Union na 2018, ụlọ akụ ahụ amụbawo nkwado ya maka eriri batrị iji kwalite nguzobe nke usoro iwu onwe na Europe.
Teknụzụ batrị ike bụ isi ihe iji nọgide na-asọmpi Europe na ọdịnihu obere carbon. Nkwado ego nke European Investment Bank maka Northvolt dị ezigbo mkpa. Mgbakwunye a na-egosi na mbọ ụlọ akụ na-arụ na ngalaba ego na teknụzụ nwere ike inyere ndị ọchụnta ego aka itinye aka na nkwa a.
Maroš Efiovich, Onye isi oche EU na-elekọta European Batrị Union, kwuru, sị: Investlọ Akụ European Investment Bank na European Commission bụ ndị mmekọ dị iche iche nke EU Batrị EU. Ha na ụlọ ọrụ batrị na mba ndị otu ya na-arụ ọrụ na-eme ka Europe nwee ike ịkwaga n'akụkụ ebe a. Nweta onye ndu zuru ụwa ọnụ.
Northvolt bụ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ na Europe. Companylọ ọrụ ahụ na-ezube iwute Gigafactory batrị obodo mbụ nke Europe na obere ikuku carbon. Site na ịkwado oru ngo a bu ihe obula, EU guzobewo ebumnuche ya iji meziwanye ikike Europe na iguzobe onwe ya na ulo oru na teknụzụ.
Northvolt Ett ga-arụ ọrụ dị ka isi nrụpụta ugwu nke Northvolt, na-ahụ maka ịkwadebe ihe ndị na-arụ ọrụ, mgbakọ batrị, imegharị ihe na ihe inyeaka ndị ọzọ. Mgbe ọrụ zuru oke, Northvolt Ett ga-ebu ụzọ wepụta 16 GWh nke batrị kwa afọ, ma gbasaa gaa na 40 GWh nwere ike Ejiri batrị Northvolt emere maka ugboala, nchekwa grid, ulo oru ngwa na obere ngwa.
Peter Karlsson, onye ọrụ mmekọrịta na onye isi oche nke Northvolt, kwuru, sị: “Investlọ Akụ European Investment Bank arụwo ọrụ dị mkpa n'ime ka ọrụ a kwe omume site na mmalite. Northvolt nwere ekele maka nkwado nke ụlọ akụ na European Union. Europe kwesịrị iwu nke ya Site na nnukwu ọnụ ọgụgụ batrị na-emepụta batrị, Investlọ Akụ Etiti European etinyewo ntọala siri ike maka usoro a. ”